Samsung Renove: ny rafitra fihenam-bidy ho an'ny Galaxy S9 | Androidsis
Samsung Renove: ny rafitra fihenam-bidy ho an'ny Galaxy S9
Eder Ferreño | | MWC, About us, Samsung
Omaly dia andro iray manandanja lehibe ho an'i Samsung. Hatramin'ny nanatontosan'ny multinational koreanina ny Galaxy S9 sy S9 +, ny sainam-pirenena roa vaovao. Fitaovana roa izay hanome be hiresaka mandritra ny volana vitsivitsy. Saingy, tsy izany ihany no zavatra nambaran'ny orinasa tamin'ity andro fisokafan'ny MWC 2018 ity. Koa satria ny marika dia nanambara ny Samsung Renove.
Inona ny Samsung Renove? Ny anarany dia efa manome famantarana kely antsika. Izy io dia rafitra fihenam-bidy ho an'ireo mpampiasa izay te-hividy ny Galaxy S9. Afaka mahazo fihenam-bidy ianao rehefa mividy telefaona raha manome ny findainao.
Ny drafitra dia misy amin'ny fivarotana mpiara-miasa na amin'ny fivarotana ofisialin'ny marika. Ka izay liana handray anjara na hampiasa an'ity Samsung Renove ity dia efa afaka manao izany. Ahoana no fiasan'ity drafitra marika ity? Voalohany indrindra, ny zavatra tsy maintsy ataon'ny mpampiasa dia mividy ny Galaxy S9 na S9 +. Dingana voalohany amin'ny zava-drehetra.
Raha vantany vao novidiana ny telefaona dia hamboarina ny fanavaozana. Manaraka, mila mankany amin'ny tranokala Brightstar ny mpampiasa, amin'ity rohy. Any ianao dia tsy maintsy manaraka ny dingana voalaza, izay nohazavaina tsara. Ho an'ny zavatra tsy maintsy atao ampidiro ny fitaovana IMEI ary amin'izay dia ho fantatsika ny lanjan'izy ireo manome lanja ny fitaovana.
Miankina amin'ny maodely hoentinay, hafa ny vidiny. Ireto ny sasany amin'ireo vidiny navoaka tao amin'ny tranokala Samsung Renove:
Samsung Galaxy S8 +: 376 euro
Samsung Galaxy S8: 336 euro
Galaxy S7 Edge: 231 euro
Galaxy S7: 188 euro
Galaxy S6: 165 euro
Na dia ny marika aza no mitatitra izany Ity fanombanana ity dia natao noho ny fahasalamana tsara amin'ny telefaona finday. Ka raha tsy eo amin'ny toe-javatra optimum ny terminal anao dia tsy hahazo izany vola izany ianao. Ankoatr'izay, ity Samsung Renove dia hetsika fampiroboroboana izay haharitra hatramin'ny 25 martsa. Ka raha mieritreritra ny hividy ny Galaxy S9 ianao ary manana telefaona Samsung dia aza misalasala mampiasa ity programa ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Renove: ny rafitra fihenam-bidy ho an'ny Galaxy S9
Ity no fanambarana ofisialy voalohany an'ny Galaxy S9
Ny Galaxy S9 sy S9 + dia manohana karatra microSD hatramin'ny 400GB